ओलीसँगको भनाभन श्रीमान-श्रीमतीको जस्तो हो : नेता नेपाल – Radio Prabhav 92.4 Mhz
August 23, 2019 गृहपुष्ठ / राजनीति
ओलीसँगको भनाभन श्रीमान-श्रीमतीको जस्तो हो : नेता नेपाल
भदौ ६, २०७६ काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको भनाभनको विषयलाई गम्भीर ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेका छन्।
सहयोगी नगर सामुदायिक समाजले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले कार्यकर्ताहरूले त्यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषयलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गरेका हुन्। विषयवस्तुमाथिको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन, एजेण्डा स्थापित गर्न पार्टीभित्र वादविवाद भइरहने भन्दै नेता नेपालले त्यसलाई श्रीमान श्रीमतीको घर झगडाको रूपमा बुझ्न पनि सुझाव दिएका हुन्।
झगडा भयो भनेर वैवाहिक जीवन प्रति नै निरास हुनुको सट्टा समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिमा पनि भागेर नभई समस्यासँग जुध्दै र सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेपालले भने, ‘नेताहरूबीच भनाभन भएछ भनेर पूर्ववक्ता साथीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो यो बाट आत्तिनु केही पनि पर्दैन। के घरमा श्रीमान् श्रीमतीको झगडा भयो भने दिक्क मान्ने? त्यही हो। विहे गर्नु नै बेकार रहेछ। छोराछोरी जन्माउनु नै बेकार रहेछ भन्नू? यो जीवनको यथार्थ हो। पछाडि हट्नु हुँदैन।
आएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? समस्या त आउछन्। समस्या नआओस् भन्ने हो भने पर जंगलमा गएर एक्लै तपस्या गरेर बसे हुन्छ। सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने हो भने अनेकौँ समस्याहरू आउँछन्। बाधा अवरोधहरू आउछन्। ती समस्याहरूको सामना गर्ने आँट हुनुपर्छ। सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ। यदि तपाईंमा सामर्थ्य छैन भने तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न।’ नेता नेपालले पारिवारिक, राजनीतिक लगायत सबै क्षेत्रमा नेतृत्वले सुन्ने धैर्यता गर्नुपर्ने र सबैको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले, ‘फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आखैमा काँडै संसार’ भन्ने गीतको दृष्टान्त दिँदै व्यक्तिको सोच, दृष्टिकोण, सामर्थ्य तथा ज्ञानका आधारमा समस्या सामान्य र असामान्य हुने बताए। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच बिहीबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा विवाद भएको थियो। जहाँ उनीहरूले एकअर्काप्रति कडा शब्दमा प्रहार गरेका कुरा सार्वजनिक भएका थिए। जसलाई लिएर आज नेता नेपालले जवाफ दिएका हुन्।
पार्टीभित्रको अनुशासन विस्तारै खस्कँदै गयो अध्यक्ष: प्रचण्ड